Medical Writings ဆေးပညာစာများ: AIDS themes (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) ဆောင်ပုဒ်များ
Universal Access and Human Rights “အားလုံး လက်လမ်းမီရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး”
(အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ပုဒ် AIDS themes တွေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့တယ်။
World AIDS Day နေ့အတွက်သာ သုံးရမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဆောင်ပုဒ်တွေကို ၁ နှစ် ၂ နှစ် သုံးနိုင်ကြတယ်။ ဥပမာ Campaigning slogans တွေဖြစ်တဲ့ Stop AIDS - Keep the Promise ဆိုတာကို အစိုးရတွေ သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိ တည်အောင် တနှစ်ပတ်လုံး သုံးကြရတယ်။ G8 အစည်းအဝေးတွေအထိ ရောက်တယ်။
စကတည်းကနေ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အထိ UNAIDS က သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး World AIDS Day campaign အတွက် တနှစ်တာဆောင်ပုဒ် Annual themes တခုစီ ရွေးချယ်ပေးတာ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၈ ကြတော့ World AIDS Campaign's Global Steering Committee ကနေ World AIDS Day theme တနှစ်တွက် တခု ရွေးပေးလာတယ်။
၂ဝဝ၅ ကနေ ၂ဝ၁ဝ အတွက် Stop AIDS. Keep the Promise ဆိုတာ ရွေးထားတယ်။ တနှစ်တာအတွက် Sub-theme ဆောင်ပုဒ်ငယ်တခု ရှိသေးပြန်တယ်။
“အားလုံး လက်လှမ်းမီရေး နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး”ဆိုတာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အတွက် ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်တယ်။၂ဝ၁ဝ ကမ္ဘာ့ (အေ-အိုင်-ဒီ-အက်စ်) နေ့ မရောက်ခင်ရက်တွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတွေ ဖတ်ရတယ်။
မြန်မာပြည်က သတင်းတော့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
• “အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာသည်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အားပေးနှစ်သိမ့်”
• “မဖြူဖြူသင်း ကူညီနေသည့် HIV ဝေဒနာသည်များကို အာဏာပိုင်က နေခွင့်မပြု”
• “HIV/AIDS ဂေဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရ ရေးသားချက် ရန်တိုက်သလို ဖြစ်နေ”
• “အဖွဲ့ချုပ်က ကူညီနေသည့် AISD လူနာများကို ဧည့်စာရင်း ခွင့်ပြုပြီ”
• “ရန်ကုန်ရှိ ကဗျာဆရာ၊ သီချင်းရေး ဆရာနှင့် ပန်းချီဆရာများ စုစည်းပြီး တောင်ဒဂုံ ၃၇၆ မိသားစုဂေဟာမှ HIV/AIDS နှင့် အတူ နေထိုင်သူများကို ယနေ့ နေ့လည် လာရောက် အားပေးခဲ့သည်။”
Xinhua တရုပ် အစိုးရ သတင်းဌာနကတော့ ဘတ်စကက်ဘောသမား အကျော်အမော် (မက်ဂျစ်-ဂျွန်ဆင်) ကို “ကမ္ဘာ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် မက်ဂျစ်” ဆု ပေးလိုက်တယ် လို့ ဖေါ်ပြလိုက်တယ်။ China Daily ကလဲ HIV/AIDS ဆောင်ရွက် နေကြတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကို တရားဥပဒေ အဆင့်အတန်း ရကြတော့မယ်လို့ ရေးသားတာ တွေ့ရပါသေးတယ်။
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁ ရက်၊ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့
“အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ တိုက်ဖျက်ဖို့ ခွဲခြားမှုကို ရှောင်ကျဉ်လို့၊ ကာကွယ်ကုသစောင်ရှောက်စို့” Stop AIDS. Keep the Promise” “Avoid Stigma and Discrimination: Towards Universal Access” ဆိုပြီး ဖေါ်ပြထားတယ်။ ကမ္ဘာသုံး နဲ့တော့ မလွဲပါ။ ဒါပေမဲ့ "အားလုံး လက်လှမ်းမီရေး” လဲ မပါဘူး။ “လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာလဲ ပျောက်နေတယ်။
“လူ့အခွင့်အရေး” နဲ့ “အေအိုင်ဒီအက်စ်” ကို တွဲပြီး သိမြင်လာကြတာက ၂ဝဝ၃ အေပြီလ ၆ ရက်နေ့ ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟဗားနာ မှာ လက်တင်အမေရိကား ဒုတိယအကြိမ် HIV/AIDS ကွန်ဖရင့် ကျင်းပပြီး နောက်မှာ ဖြစ်ပါမယ်။
“လူ့အခွင့်အရေး” ဆိုတာ မကြိုက်တာလား မပြောတတ်ဘူး။ အဲလို အစိုးရမျိုးနဲ့ နေရတဲ့ ဝေဒနာသည်တွေ “နူရာ-ဝဲစွဲ၊ လဲရာ-သူခိုးထောင်း” ဆိုသလို၊ “ကုမရသေးတဲ့ ရောဂါ ဝင်ပါတယ်ဆိုမှ အစိုးရက ထောင်းတာပါ ခံနေကြရတယ်။”
"သူခိုးနဲ့ တူသော အစိုးရဘေးက ဝေးကြပါစေ။"